[Vaovao antoandro] Talata 05 janoary 2021
♦ Volamena malagasy milanja 73,5 kg indray no tratra tatsy amin'ny seranaam-piaramanidina Johannesbourg Afrika atsimo. Mpandeha miisa 3, niainga teo Madagasikara no tompon'antoka... ♦ Nankatoa ny fampiasàna vaksiny fanefitry ny Covid-19, novokarin'ny laboratoara amerikàna Moderna ihany koa i Israel. Firenena voalohany nanome fahazoan-dalana hampiasàna io vaksiny io ivelan'i Amerika avaratra...
Tena teraka ny 25 desambra ve i Jesoa Kristy ?
Raha hanontany anao aho izao hoe : oviana i Jesoa no teraka ? 25 Desambra hoy ianao. Tsy tena fantatra anefa hoe andro inona no nahaterahan’i Jesoa Kristy. Ny ao amin’ny baiboly koa tsy nisy nilaza izany.
Dingana hatrarana tanjona
Ny dingana ho amin'ny fanatrarana ny tanjona eo amin'ny fiainana dia miainga amin'ny paikady toy ny fananana toetra tsy manjehy ny andro ho lava, ny famaritana tsara sy mazava izay hatao, hiainana ilay teny hoe : Aza mihetsika aloha fa mialohan'ny hiaingàna dia fantaro hoe ho aiza ianao...
I Masindahy Odilon no tsaroana ny 04 janoary. Teraka ny taona 962 tao Saint-Cirgues (Haute-Loire) i Odilon. Tompomenakely tao Mercœur ao Auvergne ny fianakaviany ary nanana tany nanelanelana an'i Brioude sy Langeac. Nanomboka ny fiofanana ho Chanoine tao amin'ny fiangonan'i Masindahy Julien tao Brioude izy.
Pejy 5 amin'ny 108